1.Apple chibereko chinotapira, chinodyiwa chemuti Malus domestica. Chibereko chakatenderera chinogona kuuya nemhando dzakasiyana uye nemavara senge yeyero, girini kana tsvuku. Maapuro anowanzo kutapira uye cam inodyiwa nyowani kana kushandiswa mune zvekudya, sosi, kupararira, majisi kana yakakurumbira apple pie. Mbeu yeapuro inogona zvakare kupwanywa kubvisa mafuta, ayo anoshandiswa muindasitiri yezvizoro. Chibereko chine macarbohydrate, shuga uye faibha ine mashoma mapuroteni nemafuta. Chigadzirwa chinodzika ...
Kukosha kwehutano hwemaapuro 1, apuro rudzi rwechikafu chakadzika chekoriori, magiramu 100 anoburitsa 60 kcal huwandu hwekupisa. MaApple zvinovaka muviri mune zvakasungunuka, zviri nyore kutorwa nemuviri wemunhu, unozivikanwa se "mvura mhenyu". inobatsira kuputsa sarufa uye kugadzira ganda rakatsetseka uye nyoro. 2, apuro rine "huchenjeri michero", "chiyeuchidzo chibereko" zita rekurumbidza.Kudya mamwe maapuro kwave nenguva kuchizivikanwa kunatsiridza ndangariro nehungwaru. Maapuro akapfuma mushuga, mavitamini, zvicherwa uye ...
Yemakwikwi mutengo Chinese Wholesale nyowani tsvuku hanyanisi kutengeswa
1, Hanyanisi ine simba rekuparadzira mhepo inotonhorera, nekuti mababu nemashizha eOnion zvine mhando yemafuta asina kugadzikana anonzi propylene sulfide, ine hwema hwezvinonhuwira, chinhu ichi chinogona kurwisa kutonhora, kudzivisa furuwenza hutachiona, ine simba rakasimba rebhakitiriya. Hanyanisi vakapfuma mukudya kunovaka uye kunhuwa mukunhuwa.Iinogona kukurudzira kuchengetedzwa kwemudumbu, ura uye gland gland, kuwedzera chishuwo uye kukurudzira kugaya. Kunze kwezvo, hanyanisi haina mafuta. Mafuta aro akakosha ane musanganiswa ...